အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုမော်ကွန်းတိုက်3၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း (စာမျက်နှာ 3)
AR ၏ခြေချင်းဟာ Off လှုပ်
ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တိုးပွားအဖြစ်မှန်တစ်အတော်လေးအခြေတည်စအဆင့်တွင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်ဖီးလ် Ventre, VP အားကစားနှင့်ထုတ်လွှင့်, Ncam အသုံးပြုပုံယင်း၏အသုံးပြုမှုနောက်ဆုံးတော့ကွာ gimmicky '' သစ်ကိုကစားစရာ '' စင်ပေါ်မှာကနေရွေ့လျားလျက်ရှိ၏ AR ဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမျအကြောင်းအရာအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြသဖြင့်, ခေတ်မီပရိသတ်တွေအပြည့်အဝအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ကြသည် Hyper-ကိုမှန်ကန်ယုံကြည်ဂရပ်ဖစ်တောင်းဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါအားကစား ...
VFX Legion မကြာသေးမီကမေလ 31st အပေါ်ရုပ်ရှင်ရုံဖွင့်လှစ်ရာ '' နေ MA, 'Blumhouse Productions' 'သစ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်အလုပ်ပတ်ရစ်။ အဆိုပါဆုရစတူဒီယိုက၎င်း၏ကုမ္ပဏီရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒီဂျစ်တယ် mutilating နှင့် eviscerating ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့အများဆုံးစက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောနဲ့ရပ်ဆိုင်းမှုမြင်ကွင်းများတချို့၏ visceral သက်ရောက်မှုကြီးထွားကြောင်းအစစ်လားထင်ရတဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးမှလက်မှုပညာလက်တွေ့ကျတဲ့ရိုက်ကူးတိုးပွားလာပုတ်။ ...
Quantum လူတိုင်းမှာဂျေဆင် Coari, ကို Global ဒါရိုက်တာ, ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဖြေရှင်းချက်စျေးကွက် flash ကိုထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်မနှုတ်နိုင်ကြောင်းသဘောတူ။ အခြို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Workflows အဘို့, စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အယ်ဒီတာများ compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K (သို့မဟုတ် ပို. ပို. မကြာခဏ 8K) ဗီဒီယိုမြောက်မြားစွာစီးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည့်အခါဥပမာ, flash စသည့်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တုံ့ပြန်မှုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုပေးနိုင်ပါသည် ...
Author: Bitmovin မှာ Stefan Lederer, CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူကျနော်တို့တှငျနထေိုငျအဆိုပါ Multi-Screen, Multi-Platform ကိုကမ္ဘာကအကြောင်းအရာစားသုံးသူ '' ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံများ၏အဆင်ပြေစေရန်သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပရိသတ်များအတွက်ယခုစားသုံးသူကိုမဆိုအကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုတဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အရှည်ရုပ်ရှင် feature မှမဆိုရာအရပ်ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားကနေအရာရာကိုကြည့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနိုင်ပါ။ လူကြိုက်များ streaming များကယ့်ကိုဘယ်လောက်မှသေတမ်းစာအဖြစ် ...
... ထိုအပယ်သွားကြှနျုပျတို့သညျသှား! အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်အဘို့အ Las Vegas မှာ, Nevada - အခုတော့ငါသည်ငါ့လမ်းဖို့ "သိန်စီးတီး on", သုံးဆယ်-တထောင်ခွကေိုထလေထုထဲတွင်ပေါ့! ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုငါ့အဆင့်ကိုငါ့ကိုအခြေချ-down မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါလေယာဉ်ပေါ်မှာစဉ် blogging စတင်ဖွင့်! (ဤအဓိပ်ပါယျယခုတစ်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည် !!!) (NAB ပြရန်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ "ကျွန်တော်ပုံပြင်ဒီမှာစတင်" ကတည်းက ...
3 ၏စာမျက်နှာ 37«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»